ကျန်းသတ္တုတွင်းအပူမီးဖိုထဲမြေမှုန့်စုဆောင်း China Manufacturer
Botou Youjian Environmental Protection Equipment Co. LTD. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်: 11% - 20% Cert: FAMI-QS, GB, ISO9001, ISO9002 ဖေါ်ပြချက်: EAF ဖုန်ကောက်ခံရေး,ကျန်းဖုန်ကောက်ခံရေး,စက်မှုဆီလီကွန်သံဖုန်ကောက်ခံရေး
Home > ထုတ်ကုန်များ > လူပျိုစက်ဖုန်ကောက်ခံရေး > ကျန်းသတ္တုတွင်းအပူမီးဖိုထဲမြေမှုန့်စုဆောင်း
အဆိုပါသတ္တုရိုင်းအပူမီးဖိုထဲရောစပ်၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်တစ်ဦးမရှိမဖြစ်အရေးကြီးသောပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပတ်ဝန်းကျင်တခုတခုအပေါ်မှာ unnegligible အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ထားတဲ့ကြီးမားတဲ့စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု, flue ဓာတ်ငွေ့ပမာဏကြီးမားတဲ့နှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်, ရှိပါတယ်။ "ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖွဲ့စည်းပုံမှာရိုးရှင်းသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အနိမ့်သော Operating ကုန်ကျစရိတ်" ၏ဒီဇိုင်းကိုစံနှင့်တကွ, သွေးခုန်နှုန်းအိတ် filter ကိုနှင့် PPC ဓာတ်ငွေ့ box ကိုသွေးခုန်နှုန်းအိတ် filter ကသတ္တုရိုင်းအပူမီးဖို၏ flue ဓာတ်ငွေ့ filtration ဘို့အကြံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါနစ်မြုပ်ကို arc မီးဖို၏ရှည်လျားသောအိတ်သွေးခုန်နှုန်းအိတ် filter ကိုကျယ်ပြန့်တွေဖြစ်တဲ့ဒါပေါ်မှာသတ္တုဗေဒ, ဘွိုင်လာ, ထုံးလညျးမီးဖို, ရောနှောနှင့်အမျှအများအပြားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အသုံးပြုသည်။
နစ်မြုပ်ကို arc မီးဖို၏အနိမ့်ဖိအားသွေးခုန်နှုန်းမိုးရွာသွန်းမှုအောက်ပါဝိသေသလက္ခဏာများရှိပြီး:
1, ပြာသန့်ရှင်းရေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ကောင်းကြီးမားသောထွင်းဖေါက်၏အသုံးပြုမှုကိုနစ်မြုပ်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်, အသေးစားမှုန်ရေမွှားခုခံ, အနိမ့်ဖိအား, 2000Pa ရောက်ရှိဖို့ပြာ blowout ဖိအား, ခိုင်မာတဲ့ပြာသန့်ရှင်းရေးနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်, အကျိုးသက်ရောက်မှုကောင်းလှ၏။
2, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဆင်ပြေဖြစ်ပါသည်: အထက်အဖုံးဖွဲ့စည်းပုံကို အသုံးပြု. နှင့် filter ကိုအိတ်ဘောင်လုပ်ပြီး Extract အလျင်အမြန်အိတ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်; အဓိကပန်ကာစင်သောလေထုအလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်၌တည်ရှိ၏, အဓိကပန်ကာဒဓါးအဘယ်သူမျှမသန့်ရှင်းရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ကြောင်းနှင့်ပန်ကာအတော်လေးတည်ငြိမ်ပြေး။
3. အဆိုပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြည်နယ်: အ wear ခုခံတိုးတက်စေနိုင်သည့်ပေါင်းစပ် filter ကိုအမျိုးအစားအသစ်တစ်မျိုး, flexural ခုခံနှင့်ခွံခွန်အားကိုမြင့်မားတဲ့အပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည်ဖြစ်ပြီး, လေတိုက်အမြန်နှုန်းနှင့်ရှည်လျားသောဝန်ဆောင်မှုဘဝတိုးတက်ကောင်းမွန်လာနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအရိုးစုအဓိကကျတဲ့ကဏ္ဍမှိုဂဟေအရိုးစုချမှတ်လျက်, အရိုးစု၏အထက်ပိုင်းကောင်းသောခြုံငုံစွမ်းဆောင်ရည်, ချေးခုခံမြင့်မားမျက်နှာပြင် finish ကိုနှင့်မျှမပျက်စီးမှု filtration သည့်မြေတပြင်လုံး venturi ပြွန်, တပ်ဆင်ထားသည်။ အဆိုပါအိတ်, filter ကိုယူနစ်နှင့် dedusting ဘုတ်အဖွဲ့ disassembly နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက်အဆင်ပြေသည်, ကောင်းသောတံဆိပ်ခတ်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိပြီးဖြစ်သောနွေဦးလက်စွပ်နှင့်အတူစုဝေးလျက်ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးကောင်း, အလုံးစုံလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုထိထိရောက်ရောက်လျှော့ချဖြစ်ပါတယ်။
4, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်း: အသတ္တုရိုင်းအပူမီးဖို၏ထွက်ပေါက်၏ flue ဓာတ်ငွေ့အပူချိန်ထက်ပိုမို 450 ဒီဂရီရောက်ရှိနိုင်သောအထူးအခွအေန၏အမြင်တွင်, ပြင်ပကသဘာဝအအေးစနစ်အားအထူးစွမ်းအင်နှင့်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကိုအလွန်ကုန်ကျစရိတ်ချွေတာခြင်းမရှိဘဲ, ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် ။ ဒီအခြေခံပေါ်မှာ, အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုအအေးလေထုအဆို့ရှင်အပူချိန်များလွန်းမြင့်မားသည်အခါပစ္စည်းကိရိယာများ၏စစ်ဆင်ရေးကိုသေချာစေရန်ထည့်သွင်းထားသည်။ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး။
Related Products List: EAF ဖုန်ကောက်ခံရေး , ကျန်းဖုန်ကောက်ခံရေး , စက်မှုဆီလီကွန်သံဖုန်ကောက်ခံရေး , DDF ဖုန်ကောက်ခံရေး , 10T ဖုန်ကောက်ခံရေး , type ဖုန်ကောက်ခံရေး , Cupola ဖုန်ကောက်ခံရေး , သံဖုန်ကောက်ခံရေး